6 no maty tao amin'ny valan-javaboary Virunga: azo antoka ho an'ny mpizahatany ve izany?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Kongo, vaovao momba ny dia momba ny dia » 6 no maty tao amin'ny valan-javaboary Virunga: azo antoka ho an'ny mpizahatany ve izany?
Aprily 9, 2018
Virunga National Park dia nanambara ny fahaverezan'ny mpiambina 5 sy mpamily mpiasa ao amin'ny Sector Central of Virunga National Park akaikin'ny sisintany Ishasha ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo (RDC).
Notifirin'ny lehilahy tao amin'ny vondrona milisy Mai Mai ireo lehilahy ireo ny marainan'ny alatsinainy teo akaikin'ny sisintany niaraka tamin'i Oganda. Ny Mai Mai dia niorina tamin'ny taona 1990 mba hiadiana amin'ny fanafihana manerana ny sisintany avy any Rwanda.
Nanome toky ny tompon'andraikitra amin'ny valan-javaboary fa ny filaminana amin'ny sehatra hafa amin'ny valan-javaboary mbola tsara ary mitohy soa aman-tsara ny fizahan-tany.
Nakatona ny tobin'i Lulimbi mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny. Miandrandra izany ny tompon'andraikitra amin'ny valan-javaboary hisokatra amin'ny ho avy tsy ho ela.
Maherin'ny 150 ireo mpiambina novonoina tamin'ny fiarovana ny valan-javaboarin'i Virunga izay natsangana tamin'ny 1925.
United Airlines dia mitatitra ny fitomboana 6.5% amin'ny fifamoivoizana mitambatra
Ny US Travel dia nidera ny fampiatoana ny angona ofisialin'ny fitsangatsanganana ataon'ny governemanta
14 minitra lasa izay